को-को हुँदैछन् आज मन्त्री, आजै ४ बजे नयाँ मन्त्रीहरुले सपथ लिने तयारी. – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौं, १४ फागुन ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसँग भएको मन्त्रालय बाँडफाँट अनुसार मन्त्री चयन गरि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले बताएका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग छलफल गर्नुभएको थियो ।
एमालेले १० र माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्रालय लिनेगरि सहमति भएपनि संघीय समाजबादी फोरमले पनि सरकारमा जानसक्ने सम्भावना रहेकाले मन्त्रालयको संख्या केही हेरफेर हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् । दुवै दलका शीर्ष नेताले मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
फोरम सहभागि नभए केही मन्त्रालय बाँकी राखेर मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ । एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, नारदमुनि राना, रघुवीर महासेठ लगायतको नाम चर्चामा छ ।
यस्तै सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका ह्ृदयेश त्रिपाठीलाई पनि मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । यस्तै माओबादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, मातृका यादव, देबेन्द्र पौडेल, शक्तिवहादुर बस्नेत, सुदन किराँती, वीना मगर लगायतको नाम चर्चामा छ ।
नयाँ मन्त्रीहरुले आजै साँझ ४ बजे सपथ लिने तयारी भइरहेको छ ।
Prevनेपाल आईडलको बुद्ध, निशान र प्रतापको फ्यानका लागि दुखद खबर । जापान जान लाग्दा यस्तो भयो (भिडियो सहित)
Nextमनोज पुनको इन्काउनटर भएको केही दिनमै अर्का अभियुक्त रेशम चौधरीले गरे आत्मसमर्पण(भिडियो रिपोर्ट)
सारा नेपालीको मन रुवाउने अत्यधिक रक्तश्राप भएपछि हेलिकप्टरद्वारा उद्दार , दीपाश्रीले शुरु गर्ने भइन यस्तो अभियान !! (भिडियो सहित)
शिशिर भण्डारीले गाए यस्तो गीत । भाईरल जुम्ल्याहा दिदी बहिनीले अभिनय गर्दै -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
हिन्दु बिरुद्ध एक शब्द बोलिका कारण इमरान खानले हटाए यी मन्त्रीलाई, माफीले लागेन पार (पूरा खबर हेरी सेयर गरौ)